IINWELE ZOKUCHEBA IINWELE: UBUNGAKANANI BENWELE YECLIPPER GUARD (ISIKHOKELO SANGO-2021) - IINWELE ZAMADODA
Inombolo yokucheba iinwele-Ubungakanani beClipper
Eyona Iinwele Zamadoda Inombolo yokucheba iinwele-Ubungakanani beClipper
Amanani okucheba iinwele kunye nobungakanani bokucheba iinwele kubalulekile ukuba uqonde ukuba ngaba ucheba iinwele kwindawo yokucheba iinwele. Kuba oonogada besiqhoboshi bahambelana nobude beenwele zamadoda ahlukeneyo, abafana abafuna…
Amanani okucheba iinwele kunye nobungakanani bokucheba iinwele kubalulekile ukuba uqonde ukuba ngaba ucheba iinwele kwindawo yokucheba iinwele. Ngenxa yokuba oonogada besiqwengana bahambelana nobude beenwele zamadoda ahlukeneyo, abafana abafuna ukusikwa okuhle kufuneka bazi ukuba lithetha ntoni inani ngalinye xa ubuza isitayile esithile. Kwaye nangona inani lesi-2 okanye lesi-3 liphela libonakala ngathi yinto nje engenamsebenzi, ungothuka xa u-1/8 we-intshi ejongeke ngokungafaniyo.
Ukunceda amadoda ukuba abone iinwele zeenwele, ubungakanani bokugada okuchongiweyo kunye nobude obunxulumene neenwele, senze inkcazo eneenkcukacha ngemifanekiso. Ke ukuba ucinga ngokusikwa kwe-buzz okanye ukuphela, jonga obu bude bokunqunyulwa kweenwele ukuze ufumane ukunqunyulwa kwakho kunye nesitayile.
1Iinwele zokucheba iinwele kunye nobukhulu boGadi beClipper
MbiniIsikhokelo esiKhawulezayo sokuKhangela kubungakanani beClipper yeenwele
3Inombolo 0 Inwele
4Inombolo 1 yokucheba iinwele
5Inombolo yesi-2 yokucheba iinwele
6Inombolo 3 yokucheba iinwele
7Inombolo ye-4 yokucheba iinwele
8Inombolo yesi-5 yokucheba iinwele
9Inombolo ye-6 yokucheba iinwele
10Inombolo ye-7 yokucheba iinwele
Shumi elinanyeInombolo ye-8 yokucheba iinwele
12Ezona ziNwele ziLungileyo zaMadoda
Iinwele zokucheba iinwele kunye nobukhulu boGadi beClipper
Masiqale ngeziseko zesigama seenwele. Amanani okucheba iinwele kunye nonogada obukrozayo ubhekisa kwiziqeshana ezincamathele kumatshini wokucheba iinwele zombane. Unokufumana inani lomlindi ngamnye eligxunyekwe kwiplastikhi. Uninzi lweenwele ezisikiweyo ziza neseti yokuloba eyi-8 kwaye zibonisa ubude beenwele eziza kushiyeka xa zichetyiwe.
Ngokubanzi, inani ngalinye lokucheba limela 1/8 ye-intshi ubude. Njengoko amanani enyuka, kukwanjalo nobude bokunqunyulwa kweenwele. Xa amadoda ebuza i-barber yenombolo 1 okanye yesi-2, bacela ukuba kusetyenziswe ubungakanani bokhuseleko oluthile. Inani elingu-0 lisikiwe ngaphandle konogada kwaye lukhangelekile (1/16 intshi yeenwele ezishiyekileyo). Ubungakanani obahlukeneyo bokugada bufumaneka ngokufanelekileyo xa abachebi besebenzisa ii-clippers ukusika i-buzz okanye ukufiphala kweenwele.
Isikhokelo esiKhawulezayo sokuKhangela kubungakanani beClipper yeenwele
Njengoko besesitshilo, inani eliphakamileyo liphezulu, kokukhona iinwele zinde. Umzekelo, ukucela iNombolo 1 yokucheba iinwele kuthetha ukuba # 1 unogada uya kuqhotyoshelwa kubude beenwele obuyi-1/8 intshi. Emva koko iNombolo yesi-2 yokucheba iinwele isesishunquli esifutshane kakhulu esihambelana ne-1/4 intshi ubude; Inani elingu-3 lokucheba iinwele kushiye u-3/8 intshi yeenwele; Inani 4 Ukucheba iinwele kukude, ubude obuphakathi bunqunywe nge-intshi ye-1/2; kunye neNombolo 5 Ukucheba iinwele kugcina u-5/8 intshi yeenwele entlonzeni. Umfana unokucela iNombolo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okanye 8 wokucheba iinwele.
Nazi iinombolo zokucheba iinwele kunye nobungakanani bazo bendawo yokugada (nge-intshi yobude beenwele):
Inombolo 1 -enye-sibhozo ye-intshi
Inani 2-ikota enye ye-intshi
Inombolo yesi-3- e-8-intshi ye-intshi
Inombolo 4 - isiqingatha se-intshi
Inombolo yesihlanu - yesihlanu nesibhozo ye-intshi
Inani le-6-kwikota yesithathu ye-intshi
Inombolo 7 - isixhenxe-esibhozo se-intshi
Apha ngezantsi, uya kufumana imifanekiso yokucheba iinwele ezihambelana neentlobo zobungakanani beziqeshana ezisetyenziswa ziimpawu ezifana neWahl, iOster, kunye neAndis.
Inombolo 0 Inwele
Inombolo engu-0 yokucheba iinwele zezona mfutshane ezimfutshane ezinokubakho kuba akufuneki ukuba kubekho unogada oza kuqhotyoshelwa kweziqhiki. I-zero ngokusisiseko iyintloko echetyiweyo okanye a impandla iyaphela .
Inombolo 1 yokucheba iinwele
Inani lokucheba iinwele eli-1 lishiya i-1/8 ye-intshi yeenwele entlokweni yakho. Ngokude ixesha elide kune-zero, # 1 unogada usetyenziselwa amacala aphelileyo okanye ukusika okufutshane kakhulu kwe-buzz. Ukuba usebenzisa obu bungakanani bekliphu phezu kwentloko yakho, lumkiswa ukuba isikhumba sakho sasentloko siya kubonakala.
Inombolo yesi-2 yokucheba iinwele
Inwele yesi-2 yokucheba iinwele yenye yezona zinto zithandwayo kakhulu kuba zisetyenziswa rhoqo kumacala aphelileyo kunye nokusikwa kwe-buzz. Kancinci kancinci kunenombolo 1 ngo-1/4 ye-intshi ubude, inani u-2 liseli lifutshane kakhulu kodwa alikabonakalisi ulusu lwakho. Ukuba ibhali okanye uneenwele ezincinci, # 2 clipper guard kukubheja okukhuselekileyo.
Inombolo 3 yokucheba iinwele
Inombolo 3 yokucheba iinwele yenye yezinto ezithandwayo ubukhulu beclipper ezisetyenzisiweyo. Umlindi # 3 uvumela i-3/8 ye-intshi yeenwele, kwaye lelona nani liphezulu lokucheba iinwele liya kulisebenzisa ukusika ukuphela. Rhoqo, amadoda aya kucela inombolo ye-3 yokuphela okanye yokuncitshiswa kwe-buzz kuba imfutshane kwaye igcinwe iphantsi, kodwa akukho boniso lwe-scalp. Ukucheba iinwele oku-3 kusebenza kakuhle kwizinwele ezingqindilili nezibhityileyo.
zithetha ntoni iiplanethi ngokuvumisa ngeenkwenkwezi
Inombolo ye-4 yokucheba iinwele
Inombolo ye-4 yokucheba iinwele isetyenziselwa ukufumana i-1/2 intshi yeenwele. Ubungakanani be- # 4 clipper abuyi kuvelisa i-buzz emfutshane kakhulu, kwaye buqala umda kwibrashi okanye kunqunyulwe abasebenzi. Njengobude obuphakathi obufumanekayo kuninzi lwee-clippers, unogada wenombolo 4 ubonelela ngobude obufanelekileyo beenwele ukulungiselela iinwele ezilondolozayo kunye nezitayile.
Inombolo yesi-5 yokucheba iinwele
Nge-5/8 ye-intshi, inani elingu-5 lokucheba iinwele lishiya iinwele ezinde ezinokufakwa isitayile kwaye zibethwe. Sisimo esihle sokusebenzisa ukuba unqwenela ukuthambisa amacala enwele ende ngaphandle kokwenza umahluko omkhulu. Sebenzisa # 5 ubungakanani obusikiweyo bokwenza iiklasikhi ngakumbi okanye amanenekazi.
Inombolo ye-6 yokucheba iinwele
Inani leenwele ezi-6 zezitayile ezifuna 3/4 ye-intshi yobude beenwele. Njenge # 5, ubukhulu be # 6 buhlala busetyenziselwa amacala e-tapered. Kule ubude nangaphezulu, # 6 clipper unogada akasakufumani kunqunyulwa i-buzz kodwa kufutshane nokusika kweqela.
Inombolo ye-7 yokucheba iinwele
Inombolo ye-7 yokucheba iinwele ingasetyenziselwa ukufumana abasebenzi abanqunqwe ngeeklipa. Nge-7/8 ye-intshi, # 7 unogada ungoyena mhle wokubhabha iinwele zakho ngaphezulu ngaphandle kobunzima bokusebenzisa isikere. Khawukhumbule nje ukusebenzisa ubungakanani obuncinci bokucoca ukuze uzinike ukucoca okucocekileyo emacaleni.
Inombolo ye-8 yokucheba iinwele
Okokugqibela, inani leenwele eziyi-8 bobona bungakanani be clipper mde kwiimveliso ezininzi. Kwi-intshi epheleleyo yeenwele, i-8 haircut ilungele ukunciphisa iinwele ezinde ngaphezulu kwentloko yakho. Ukuphelisa amacala ngoseto olufutshane (umz. # 1, 2, 3, okanye 4) kuya kunceda ukunika ubume bakho obusikiweyo kunye nokuthelekisa, ngaloo ndlela ulungelelanise umlindi ongu- # 8.
Ezona ziNwele ziLungileyo zaMadoda
Ukuba uzisika iinwele zakho, kubalulekile ukuba usebenzise ezona kliphu zilungele amadoda. Ngelixa uninzi lwabafana lufuna nje ukusika iinwele ukuze lusebenzise ekhaya, abanye bafuna iziqwengana ezikumgangatho wobuchule ukusika iinwele ezinzima. Ekugqibeleni, nokuba ufuna enye yezi kliphu iinwele zamadoda zikumgangatho ophezulu wokucheba intloko yakho, unqumle ukusika i-buzz, okanye udibanise iintlobo ezahlukeneyo zokuphela, nazi ezinye zezona zixhobo zokucheba ezikumgangatho ophezulu. Phakathi kweemoto ezinamandla, i-blade ebukhali, ukukwazi ukusebenza kwiimeko ezimanzi okanye ezomileyo, kunye noonogada abomeleleyo, ezi mveliso ziya kunqumla kuzo zonke iintlobo zeenwele kwaye ngekhe zikuyeke!
Ukwazi iinombolo zakho zokucheba iinwele kunye nobungakanani bokucheba iinwele kubalulekile ukuba uceba ukusika iinwele zakho okanye ufumane iinwele ezifanelekileyo kwindawo yokucheba iinwele. Ngeenwele zokucheba iinwele, kuhlala kulunge ngakumbi ukunqumla iinwele zakho ixesha elide kuqala. Njengoko besitsho, linganisa kabini kwaye usike kube kanye!
Jonga ezi iinwele ezimfutshane eziphezulu zamadoda ukufumana ukusika kunye nesimbo oza kuyithanda!
ezinkulu ezintathu zezodiac
itshathi yokuzalwa enezindlu
iinwele ezinde kumacala amafutshane aphezulu
Iintsingiselo zendlu ngokuvumisa ngeenkwenkwezi
ukuphuma kunye nophawu lwenyanga
Izitayile eziBalaseleyo zeNdoda eNdala yaBadala
21 Izinwele Zabantu Abaselula